စျေးပေါသောမြေ Die ဇာမြေသြဇာဖြန့်ဖြူးခြင်း Granulator စက်ပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ။ | YiZheng
The Flat Die မြေသြဇာ Extrusion Granulator စက် အဓိကအားဖြင့်ဓာတ်မြေသြဇာကို granulating ပြုလုပ်သည်။ စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော granules များသည်ချောမွေ့။ သန့်ရှင်းသောမျက်နှာပြင်၊ အလယ်အလတ်မာကျောမှု၊ အပူချိန်နိမ့်ကျမှုတို့ဖြင့်ကုန်ကြမ်း၏အာဟာရများကိုကောင်းစွာထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။
Flat Die Fertilizer Extrusion Granulator စက်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
Flat Die မြေသြဇာ Extrusion Granulator စက် ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားနှင့်စီးရီးများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပြားချပ်ချပ်သေတ္တာစက်သည်ဖြောင့်သောလမ်းညွှန်ဂီယာပုံစံကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်တွန်းအားအားလုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင် roller ကိုလှည့ ်၍ လည်ပတ်စေသည်။ အမှုန့်ပစ္စည်းကို roller မှပုံနှိပ်စက်၏အပေါက်မှထုတ်ယူသည်၊ ဆလင်ဒါပုံစံလုံးလေးများသည် disc မှတစ်ဆင့်ထွက်လာသည်။ Flat Die မြေသြဇာ Extrusion Granulator စက် ဓာတ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းတွင်အရေးပါသောစက်ကိရိယာဖြစ်ပြီးအကြီးစားထုတ်လုပ်မှုအတွက်သင့်တော်သည်။
Flat Die Fertilizer Extrusion Granulator စက်ကိုဘာအတွက်အသုံးပြုသလဲ။
Flat Die မြေသြဇာ Extrusion Granulator စက် ကွဲပြားခြားနားသောဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့်အသုံးပြုခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်တော်တော်များများတွင်၎င်းသည်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာနှင့်ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင်ဒီဇိုင်းဆွဲအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်မြေသြဇာစက်ထုတ်လုပ်သူများအနေနှင့်သာမကကျွန်ုပ်တို့တစ်ခုတည်းသောမြေသြဇာသီးစက်များကိုထောက်ပံ့ပေးရုံသာမကမတူညီသောဖောက်သည်များအတွက်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်းကိုလည်းဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။ ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင်ဓာတ်မြေသြဇာသီးစက်ကိုဘောလုံးပုံသဏ္intoာန်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းစေရန်ဓာတ်မြေသြဇာသီးစက်များတပ်ဆင်ထားရမည်။
လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းပစ္စည်းများကို roller ကအောက်သို့ညှစ်ပြီးနောက်မှခြစ်ခြင်းဖြင့်ဖြတ်ပစ်လိုက်သည်။ ထို့နောက်အဆင့်နှစ်ဆင့်ပေါင်းစပ်ထားသောသုတ်ခြင်းသို့ဘောလုံးထဲသို့လှိမ့်သည်။ TheFlat Die မြေသြဇာ Extrusion Granulator စက် မြင့်မားသောတောင့်တောင့်ဖွဲ့စည်းမှုနှုန်း၊ ပြန်လာသောပစ္စည်းများမပါ ၀ င်ခြင်း၊ မြင့်မားသောအမှုန့်ကြံ့ခိုင်ခြင်း၊ တူညီသည့်ပတ် ၀ န်းကျင်၊
Flat Die မြေသြဇာ Extrusion Granulator စက်၏ဝိသေသလက္ခဏာများ
၁။ ဤစက်ကိုအဓိကအားဖြင့်ဇီဝအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာနှင့်အစာကျွေးခြင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် granule processing အတွက်အသုံးပြုသည်။
2. ကလုပ်ငန်းများ၌အဆိုပါ granules Flat Die မြေသြဇာ Extrusion Granulator စက် မျက်နှာပြင်ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်သန့်ရှင်းသောမျက်နှာပြင်ရှိခြင်း၊ အလယ်အလတ်မာကျောမှု၊ အပူချိန်နိမ့်မြင့်တက်မှုတို့ဖြင့်ကုန်ကြမ်းများ၏အာဟာရများကိုကောင်းစွာထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။
၃။ Uniform granules များကိုအချင်းဖြင့်ခွဲနိုင်သည်။ Φ ၂၊ Φ ၂.၅၊ ၃.၅၊ Φ ၄၊ ၅၊ Φ6၊ Φ7, Φ8စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်အရရွေးချယ်နိုင်သည်။
4. Granule အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုသည်နိမ့်ကျပြီးသိုလှောင်မှုနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်သင့်တော်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှုန်းကိုများစွာတိုးတက်စေသည်။
Flat Die Fertilizer Extrusion Granulator စက်၏အသွင်အပြင်များ
►ချောထုတ်ကုန် granule ဆလင်ဒါ။
►အော်ဂဲနစ်ပါဝင်မှုသည် ၁၀၀% အထိဖြစ်စေနိုင်သည်
►အော်ဂဲနစ်အမှုန်အမှုန်များကိုနှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုဖြင့်အသုံးပြုပြီးအင်အားတစ်ခုအောက်တွင်ပိုမိုကြီးထွားလာသည်။
►ကြာရှည်ခံသည့်ထုတ်ကုန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော granule ဖြင့်၎င်းသည်ခြောက်သွေ့မှု၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချရန် granulation ပြုလုပ်ပြီးနောက်တိုက်ရိုက်ဆန်ခါနိုင်သည်
►ကစော်ဖောက်ခြင်းအဖွဲ့အစည်းများသည်ခြောက်သွေ့စရာမလိုပါကကုန်ကြမ်း၏အစိုဓာတ်သည် ၂၀% မှ ၄၀% အတွင်းရှိနိုင်သည်။
Flat Die မြေသြဇာ Extrusion Granulator စက်ဗီဒီယို Display ကို
Flat Die မြေသြဇာ Extrusion Granulator စက်မော်ဒယ်ရွေးချယ်ရေး
ထုတ်လုပ်မှု (t / h)
granulating နှုန်း (%)
granule အပူချိန်မြင့်တက် (℃)
ရှေ့သို့ အမျိုးအစားအမျိုးအစားအော်ဂဲနစ် & ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာ Granulator စက်
နောက်တစ်ခု: နှစ်ကြိမ်ဝက်အူ Extruding Granulator